Nhau - Genzon Novel Equipment, kuenda ku "2019 Suqian Green Industry Expo"
Musi wa 28 Gunyana, chiitiko chemunharaunda che1999 Suqian Green Viwanda Expo chakaitirwa kuvhurwa kukuru muSuqian Exhibition Center. Dingindira reGreen Fair iri "rakasvibirira, kubatanidza uye kusvetuka", Tarisa pane iyo indasitiri yakasvibira nehupfumi hwehupfumi kuitisa nhaurirano dzehupfumi nekutengeserana, kusimudzira kubatana kwehunyanzvi hwesainzi uye hunyanzvi hwekuvandudza nekusimudzira indasitiri, uyezve kuunganidza hutsva hwegirini. leapfrog kuvandudza
Genzon Novel Equipment, sebazi rinozivikanwa remunharaunda, yakaunza zvigadzirwa zvaro zvehunyanzvi kuchiratidziro. Genzon Novel Equipment yakaratidzawo yayo huru chigadzirwa chinyorwa: Packaging base firimu, Kadhi kuchengetedza base firimu, Bvisa base firimu, Dziviriro base film, Bronzing base film, Transfer base firimu, uye Lurex tambo base firimu, Tangle firimu. Iyo kumira yakakwevera maindasitiri nyanzvi uye vanhu vanofarira.
2019 Suqian Green Viwanda Expo ndiyo hombe hukuru uye ine pesvedzero chiitiko muSuqian, kwete chete iyo yakakosha ipuratifomu yekusimbisa hupfumi, kutengeserana kutengeserana uye kushandira pamwe kwemaindasitiri, asi zvakare ndiyo yakakodzera mhando yeratidziro yepuratifomu. Genzon Novel Equipment inopinda chiitiko ichi, kwete kungovandudza mukurumbira wekunze, asiwo inowedzera mukurudzira chiratidzo.